Apho Kuhlangana Omnye Isitshayina Abafazi yam entsha Isitshayina umfazi Yoqobo kwaye iwebhusayithi malunga Isitshayina Abafazi Isitshayina Girls
Apho ingaba ndiya ukufumana Isitshayina girls? Lo mbuzo rhoqo ivela ngoko ngokuba China rookies, okanye newcomer-expats kwi-China. Ngokwenene, impendulo ngu-iselwa elula. Kuyafana njengoko kulo ilizwe lakho, kunye kuphela omnye umahluko. Nokuba ngaba kuza ukusuka e-USA, i-Europe okanye Democratic Republic of congo, kuyafana njengoko kulo ilizwe lakho. Ungafumana kwabo naphi na. Ezitratweni, iinkwenkwezi, inqwelo-malls, yenu emisebenzini okanye nangalo ikhaya lakho, ukuba unengxaki ibhinqa Isitshayina roomie kunjalo. Umahluko. Unoxanduva kwi-China, kwaye ukumbule kweli lizwe sele kanti ukuvula ehlabathini, ngoko ke foreigner apha sele yayo perks. Okokuqala, unoxanduva unusual. Ngoku, usebenzisa i-kweentlobo zezityalo kwaye mysterious omnye esiza ukusuka kweli lizwe ukuza kuthi ga ngoku, kude. Ngoko ke, ixesha elininzi uza kuba indawo, nkqu xa ufaka nje kwi indlela yakho ukuthenga ngokwakho i-sakusasa. Uyakwazi ukufunda eli nqaku iincam ezininzi: Kuhlangana Asian abafazi i lula indlela. Siza kuqala nge-a no-brainer -iinkwenkwezi. Nje, phantse, wonke kwelinye ilizwe kukho iintlobo ezahlukileyo iinkwenkwezi. Ukuba sihamba a student bar, kukho pretty okulungileyo chances uza end phezulu engenanto zinikezelwe. Student iinkwenkwezi yeyona ndawo packs. Wonke umntu apho iza kunye zabo crew, kwaye ukuba akunjalo, inxalenye student ubomi kuloo nxenye town, nibe ngokunjalo gqiba ukuba beer kwaye yiya kwi. Ngxaki imali ingaba ukuya omnye exclusive iinkwenkwezi kwi-town. Nkqu, Isitshayina wemiceli-engaselunxwemeni dumps kuba bar ukuba khetha. Ngoko ke, nkqu ukuba ufaka stuck kuba umsebenzi abanye abalobi town, uza kukwazi ukufumana oko. Ngoko ke kwakhona, ukuba awuqinisekanga stuck kwi Isitshayina dolophana, awuyi kuba ukuya bar. Uza kubona ntoni thina zithetha ukuthini. Nakuba kunjalo, exclusive iinkwenkwezi ingaba apho ngaphezulu mature, elizimeleyo Isitshayina abafazi kuhlanganisa, kwaye baya kuza apho kanye kanye kuba enye isizathu njengoko nani: ukufumana ezinye inkampani. Kuphela downside kukuba ezi iindawo ingaba pretty expensive. Ngoko ke, lungisa ngokwakho kuba Western amaxabiso, ukuba ufuna ukuthenga i-basele kuba ladies. Yep. Kubalulekile cheap, kwaye namathuba ingaba phantse limitless, kodwa kukho ilanlekile ka-downsides kuyo. Uninzi Isitshayina girls, njenge Isitshayina jikelele, ingaba pretty ukuba neentloni xa oko iza zokusebenza kwi-wonke. Ngoko ke, ukuba umfazi iindlela kuwe ngendlela street, yena mhlawumbi a pro okanye kubekho inkqubela abo imisebenzi kuba ezikufutshane bar. Kanjalo, musa indlela abafazi kwi street, ukuba aninalo sele invited. Linda kude kube yena ikhangeleka ngalo kuni, smiles okanye giggles. Ukuba lixesha xa kufuneka bathethe. Clubs kwi-China ingaba elungileyo ndawo ukuze ufumane enye-busuku kuma. Kanjalo, ukuba awuqinisekanga ke entle uncwadi, phambi kwenu libonisane abanye kubekho inkqubela, thatha okulungileyo jonga ngaye yena ngu kunye. Awufuni mess kunye wobulali amagosa’ okanye wobulali”businessmen u -“girls. Isitshayina guys angabinako jonga kakhulu, kodwa ngabo pretty ngokukhawuleza kwaye lizele surprises xa oko iza fights, kwaye baya idla kuba uncedo. Xa uqinisekile ukuba ndihamba ethandwa kakhulu uncwadi, nje hamba kunye iitshati. Kodwa apha yinto: uncwadi kukho ngaphezulu ithuba uza end phezulu kunye langaphandle kubekho inkqubela ngaphandle Isitshayina omnye. Ukuba ufuna kuphela foreigner kwi company, uza kufumana i-eluhlaza ukukhanya ngabaprofeti abaninzi girls yakho ii-ofisi. Kuphela ingxaki kukuba kwi-China, uninzi workmates ayisayi approve yakho kubudlelwane, kwaye abaphathi ezimayini ayisayi efana nayo kakhulu, ingakumbi xa ufuna ukusebenzela kwimo inkampani.
Oko kukuthi akukho namnye wabo ushishino, ungathi. Kulungile, awuyi kuba trouble, kodwa yena uza. Yena babe get frowned phezu, sele idlule kwi ukuba ukukhuthazwa yena wenziwe ilindele, okanye njengoko bathi ke apha, kuba”criticized”kuba yakhe yokuziphatha, sithanda kuthi disciplined. Kunjalo, ukuba uthatha u-get watshata, izinto ziya ukufumana lula. Kodwa ude ube ukwenza, ukufumana ilungele iqelana ka-ofisi-umsebenzi enxulumene iingxaki. Ngoko ke, kuba ezizimeleyo malunga nayo. Emva zonke kubalulekile akukho namnye wabo ishishini. Akunjalo. Nantsi enye no-brainer. Uyakwazi enroll kwi omnye iindidi okanye jonga kuba tutor. Ukuba ufuna enroll kwi-iklasi ke uza kuba emva ootitshala, eziya ibhinqa. Downside ingaba kukho ngakumbi kumazwe angaphandle abafundi kunokuba ootitshala. Kodwa hiring a tutor oninika ithuba audition kwaye kubalulekile cheaper kunokuba kakhulu ulwimi izifundo. Ngoku nantsi i-unusual omnye. China ngu ngaphandle ukuthandabuza, eli lizwe kunye otyebileyo kwaye ixesha elide yenkcubeko tradition kwaye kufuneka kuza elide indlela kuba apha nokuba kungasiphi na isizathu. Ngoko ke, kutheni na ukubulala iintaka ezimbini kunye ailitye – funda into ukufumana umfazi wakho amaphupha. Umzekelo, ungafuna thatha iti eyodwa iklasi. Uza kuba kuphela foreigner phaya, kwaye bonke abafundi baya kuba phantse zonke ibhinqa. Ngoko ke, kuya kuba indawo lonke ixesha. Ukuba ufaka worried malunga ulwimi barrier, musa t. Iza kuphela ndinenza ngakumbi charming. I-goofy, clumsy foreigner kwaye wakhe omkhulu nose ukuzama ukwenza esinye esilula isivakalisi ngu-ultra-aph kwi-wonke Isitshayina umfazi ke amehlo. Emva zonke, ukuba yindlela bebona kuthi jikelele. Ukuba ngaba asingawo keen kwi exploring entsha cultures ngokusebenzisa iincwadi, ungafuna ukunaba eyakho inkcubeko. Kutheni na ukufundisa isingesi. Ezi iintlobo ezininzi ezonakeleyo imisebenzi ingaba zonke kwi-ngokuhlwa, kwaye ukuba ufuna ukuza ukusuka isixhosa ukuthetha amazwe, ingakumbi NATHI kwaye Usa, uza kufumana umsebenzi akukho ixesha kunye mnandi pocket imali kwaye unjingalwazi isihloko, apho kusoloko imisebenzi kunye Asian girls. Ndiza kukubonisa indlela ukusebenzisa ezi magnetic imiyalezo ukujika umfazi kwaye get yakhe ngaphandle kumhla kunye nje ezintathu wagqitywa. Indlela pump yena ezele curiosity, intrigue, kwaye banqwenela de yena ke picking phezulu kwayo ifowuni kwaye thumbing kumyalezo. (nokuba wandibulela okanye hayi) Kwaye njengoko okungekuko njengoko oku izandi, uya kubonisa njani ukuba usebenzise ifomu”ngesondo oko”ukulima”erotic”iingcinga kuni yayo engqondweni kwaye ingaba wakhe kwenu kokuthemba Ukucinga kwakho, craving kwenu, kwaye nkqu fantasizing malunga nawe desperately ilinde wakho olandelayo umyalezo okubaluleke Kakhulu ezi wagqitywa ngokukhawuleza ukufumana meetups ukuba baguqukele kwi ngesondo kwaye budlelwane nabanye funda kwi apha: mna anayithathela nje kutshanje stumbled kuwo a pretty ezikhethekileyo site ukuze ndandicinga kakhulu kuni guys izakuba ngenene anomdla. Ke i-utsalekoname, seduction kwaye dating isikhokelo – ndiyazi, ndiyazi, mna xa kuqaliswayo wayecinga ntoni ukuba mhlawumbi ucinga: thina anayithathela weva ke zonke phambi ekunene. Kulungile, hayi kanye kanye. Ke ngokuba Guy Yenza kubekho inkqubela kwaye, uniquely, ibhalwe ngu UMFAZI ngokuba Tiffany Taylor. Ndicinga ukuba kunjalo kukho isizathu ke enjalo okulungileyo incwadi (imiqulu, ukususela beginners, intermediate ukuba ephambili). Lo mfazi, ngokungafaniyo ezininzi, ngokwenene uyayazi yonke imdaka trick u-girls ukudlala kwi-guys kwaye ayi besoyika ukuba spill i-neembotyi kuthi abantu. Yena uya ngapha kwayo inyathelo lesi-yi-inyathelo lesi – njani ukulungisa ngokwakho, njani kwaye apho ukufumana abafazi, eyona iindlela indlela nabo kwaye get uthetha wonke ithoba unit-format. Oh, mna phantse bayilibala ibaluleke kakhulu inxalenye: Yena sichaza ethile, iindlela ‘vala’ kwi kubekho inkqubela. Ukuba kuthetha noba get yakhe inani, get wakhe ukuba buza kuba YAKHO inani, indlela asazanga a kubekho inkqubela kwaye kuhlangana phezulu abayo elandelayo imini kwaye wonke kakhulu ngakumbi. Mna nento yokuba ufuna kukuxelela ngaphezulu malunga tactics kwaye techniques ukuba ingaba kule isikhokelo kodwa kufuneka mhlawumbi umzekelo-icatshulwe ezinye iinkcukacha endaweni. I-isikhokelo iyafumaneka kwi Guy Yenza kubekho inkqubela com kwaye instantly downloadable xa ufuna anayithathela onayo ufikelelo. Mna ubuqu ayikwazanga linda ukuqala ukufunda kwaye usebenzisa imathiriyeli ngoko waba ndonwabe ukufumana ngamnye umqulu isikhokelo ezikhoyo ngokwahlukeneyo kuba kwelandelayo. Konke, highly elicetyiswayo lokufunda kuba bonke guys ukuba, ngathi kum, ukuba fed phezulu kunye dating icandelo lomboniso kwaye nje bafuna ukwazi okulungileyo iimboniselo – njani ukutsala kwaye seduce zinokuphathwa girls. Cofa apha ukuze ufunde okungakumbi Konke, highly elicetyiswayo lokufunda kuba bonke guys ukuba, ngathi kum, ukuba fed phezulu kunye dating icandelo lomboniso kwaye nje bafuna ukwazi okulungileyo iimboniselo – njani ukutsala kwaye seduce zinokuphathwa girls. Sithanda uthando ukuba wabele abanye ngaphakathi ulwazi kunye nawe kanye kwisithuba ngexesha.
Ujonge phambili kuyo
Olukhulu. Nje uzalise ifomu ngezantsi. Enkosi kuba kokuthemba Yam Entsha Isitshayina Umfazi. Nceda khangela ye-imeyile yakho ngoku kwaye qinisekisa yakho umrhumo. Lumkela ukuba zethu uqinisekiso e-mail babe zithe wabeka yakho spam bhokisi
← Kuhlangana Xiao kufa, Ebukekayo Companion Doll Wakha ukuba Nceda Lonely Abantu kwi-China Tech iindaba namhlanje
Chatroulette Simahla →